Munhu Mwari For Pfuma yake
Munhu ane Mwari pfuma yake ane zvinhu zvose muna One. munhuwo pfuma zhinji anogona wakamurambira, kana iye kubvumirwa navo, the enjoyment of them will...
Biblical MURUME CHAIYE uye Kukosha Vanoyemurika kubva Kuchiva Mwari pamusoro Vimeo. My friends at Desiring God asked me some questions about the obstacles to manhood and how to fix the problem....
Ndinoda kutanga nokufunga nyaya. Kubvira pakutanga nguva mave vamwe misoro anowanzosangana vanomhanya kuburikidza nyaya dzedu. Tine rudo nyaya, comedies, and tragedies – or...
Heinoi vhidhiyo kubva mharidzo yangu ichangobva panguva Summit Church muna Raleigh, NC. Ndaiparidza pamusoro Mark 5:1-20 pamusoro simba, simba, uye tsitsi kwaJesu. Ndinovimba kuti kukurudzira kwamuri
sei Romans 8 Anobatsira Trip Lee kubva Kuchiva Mwari pamusoro Vimeo. Shamwari dzangu pana vachishuva Mwari yakandikumbira kugoverana pamusoro ndima yoRugwaro anondibatsira kwazvo. In this clip I...
Pfungwa iri Robot
Trip Lee Hakusi Robot kubva vachishuva Mwari pamusoro Vimeo. Panguva paakabvunzurudzwa munguva ichangopfuura, Vachishuva Mwari akandikumbira kuti nditaure zvishoma pamusoro rwiyo rwangu, Robot kubva The Life Good